"Ilay marary namaly Azy hoe : Tompoko, ... tsy mba misy olona..."Jaona 5:7
"(Hoy Jesosy:) Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao."Matio 28:20
«Tsy mba misy olona tonga mitsidika ahy»: izany no tao an-tsain’ity vehivavy efa zokiolona, manirery ao amina trano iray fitaizana beantitra. «Tsy misy olona mahatakatra ny fahoriako», hoy ity tanora iray anakampo, avy nisedra olana ara-pitiavana. «Tsy misy olona hifampizarako ny mahazo ahy», hoy ny fitarainan’ity olona iray hafa, nafindra hiasa lavitra ny fonenany.
«Tsy mba misy olona»… Na aloaky ny vava na tsia izany fitarainana izany, dia maneho zavatra tsapan’ny maro ato anatin’ity tontolon’ny samy maka ho azy sy feno fitiavantena ity. Izany dia mifanohitra tanteraka amin’izay ampanantenain’Andriamanitra an’ireo mino! Ny Baiboly dia miresaka momba an’i Jesosy Kristy, Izay sady Andriamanitra no Olona, nanao izay hahatonga antsika hahita fitia eo imason’Andriamanitra, tamin’ny nanolorany ny ainy. «Manana Azy» isika, ary «momba antsika Izy».
- Mahatakatra izay manjo antsika Izy : tsy hoe mahafantatra antsika fotsiny Izy satria nahary antsika, fa nijaly tet? an-tany koa. Iza àry no afaka hahatakatra tsara kokoa noho Izy, ny mahazo antsika, rehefa sahirana isika?
- Lavorary Izy : tsy mahay mamitaka na mandiso fanantenana.
- Mahery Izy: ny teniny no nampitsaharany ny tafiodrivotra (Lioka 8:24) ary nananganany ny maty (Jaona 11:44).
- Akaiky Izy: amin’ny finoana isika dia afaka mahatsapa ny fijoroany eo anilantsika.
- Mitsimbina antsika Izy: mahafantatra izay ilaintsika mihoatra noho isika, ary tia mikarakara ny olony.
Eny, raha mahalala an’i Jesosy Kristy ho Mpamonjintsika isika, dia manana olona miaraka amintsika, amin’ny toe-javatra rehetra iainana ! Manana Azy isika!
Ary ianao, ianao ve isan’ireo tsy mba manana an’iza na iza? Aza mijanona ho irery!